Rakotomalala Lova : Manome toerana an’i Madagasikara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2008 15:16 GMT
I Rakotomalala Lova, izay fantatra koa amin'ny anaram-bosotry ny blaoginy hoe Malagasy Dwarf Hippo na Lalomena Malagasy Botry (satria ireo karazam-biby izay ripaka dia mba manan-kambara koa), dia teraka tany Madagasikara ary mitatitra momba ny blaogasyfera avy any Lafayette, any Indiana USA, izay toerana onenany sy anaovany ny asa maha-mpikaroka sy mpandrindra fikarohana hoan'ny C4L any amin'ny faritry Ethiopia sy Kenya azy : Research Associate at the Cytometry For Life (C4L) Program and a Research Coordinator.
I lova dia anisan'ireo efatra mianadahy nanorina ny fikambanana FOKO: it takes a village to raise an idea [Mifidy tanàna ambanivohitra iray mba hanandràtana filàmatra], izay tetikasa miompana amin'ny fampandrosoana an'i Madagasikara, sady vao namokatra koa ny sampany antsoina hoe Foko Blog Club izay fitaovam-pivoizana izany tetikasan'ny FOKO izany.
Ary satria i Madagasikara dia isan'ireny firenena izay tsy mba fahita matetika amin'ny matoan-dahatsoratry ny gazetin'izao tontolo izao ireny, ary tsindraindray aza dia manjavona tsotra izao amin'ny saritanin'Afrika sasantsasany, ireo lahatsoratra izay soratan'i Lova eo anivon'ny GVO [Globale Voices Online] sy ny fiarahany miasa eto amin'ny tetikasa Lingua Malagasy [Global Voices amin'ny teny Malagasy] dia tena manana ny toerany mihitsy amin'ny fampafahantàrana bebe kokoa ity nosy tokana ity sy fampanakoakoana ny feony ho ren'izao tontolo izao.
Hafiriana ny nanaovanao blaogy ? Ary manao ahoana ny lanjan'izany aminao ?
Tamin'ny faha-25 Desambra 2005 aho no nanomboka niblaogy, raha silak'irery sy tsy afaka namonjy ny fetim-pianakaviana aho tamin'izay. Faniriako ny hiombona amin'izy ireo sy hizara izany fotoan-dehibe izany ka dia tapa-kevitra aho ny hanomboka hiblaogy. Ary satria avy eo hitako fa ny olon-kafa koa dia afaka mamaky sy manolotra ireo heviny amin'ny alalan'ny hafatra apetrany, dia nikisaka kely avy amin'ny fianakaviana hoan'ny lohahevitra malalaka ny blaogiko.
Na dia misy alahelo kely aza ny fandre azy, heveriko fa ny fanaovana blaogy dia nitarika fahafenoana kokoa amin'ny fiainako amin'ny fomba samihafa. Ohatra anazavako izany, izaho dia niaina taty ivelan'ny nosy hatramin'ny Sekoly Ambaratonga Faharoa. Ny fanaovana blaogy dia fitaovana izay nahafahako nifandray indray amin'ny tanindrazako amin'ny fomba izay tsy nampoiziko mihitsy sady sarotra eritreretina. Ny fifanersaerana amin'ireo namana eto anivon'ny GVO koa dia foto-karena amin'ny serasera tendry lavitra sy amin'ny fiainana “tena izy” koa [fifaneraserana mivantana]. Satria ny fifanakalozan-kevitra mifanatri-maso dia tena zavatra sarobidy tokoa. Raha tsaraiko amin'ny fomba fijery avy amin'ny Anjerimanontolo izay tontoloko, dia heveriko fa afaka mianatra hatrany avy amin'ny hafa, ny traikefany sy izay niainany, ny tsirairay. Tena voaporofo mihitsy izany teto anivon'ireo namana izay nihaona tamiko teto anivon'ny Global Voices Online.
Raha tsy diso aho dia manoratra amin'ny blaogy maromaro ianao. Mba azonao ampahafantarina ve izy ireo sy izay lohahevitra fonosiny ? Izaho manokana ohatra dia tena mpankafy ny iray The World of Ginga and Boo-Boo [Ny tontolon'i Ginga sy Boo-Boo]. Mba ambarao hoe ?
Marina fa ohatry ny voan'ny tazon'ny fiblaogiana aho tamin'ny taona 2006, ka dia nanokatra blaogy maromaro izay mikasika lohahevitra samihafa. Taty aoriana ho dia nahatsapa fa tsy ho arako avokoa izy ireny ka dia napetrako mangingina ny sasantsasany amin'izy ireny anefa tsy nakatoko, iza no mahalala sao mbola hifoha amin'ny torimasony izy ireo ….
Ankoatry ny GVO, ireo hany sisa izay tena ilofosako dia ny blaogiko izay ilazako zavatra toy ny tahotry ny Dadako ireo Lalomena botry na koa ny fihaonako tamin'ny filoham-pirenena Iraniana;
– ny blaogin'ny foko-madagascar izay andraisanay anjara bitika amin'ny fampandrosoana an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny fampiasana ny seraseram-pifandraisana;
– ny blaogy Malagasy miray, izay sehatra iombonana andraisan'ny Malagasy anjara fitenenana ary ilay ankafiziko,
– ny tontolon'i Ginga sy Booboo, Alika 2 izay karakaraina fikambanana mpinamana aty Lafayette, Indiana, USA. Io no blaogy mora kolokoloina indrindra satria ireo alika roa ireo dia tsy mitsahatry ny manaonao foana no sady tsy ahoany akory izay fakanay sary aman'arivony aza izahay.
I Ginga io amin'sary io. Somary mitady hatavy loatra izy ka dia isan'ny ezaka ataonay ny mba hampihena azy kely.
Andao indray hiresaka momba an'i FOKO, inona no hevitra ao ambadika sy izany tanjony ? Ahoana no niantombohany ? Efa misy azo tsapain-tànana sahady ve ny fiovana naterany amin'ny andavan'andron'ny any Madagasikara?
Isan'ny adihevitra miverimberina anivon'ny blaogasyfera ny mikasika izay tokony hatao hanongorana ny fahasahiranana ara-tsosialy, ara-toekarena ary ara-tontolo iainana izay homamiadana mikiky an'i Madagasikara. Satria ny 85%-n'ny tahan'ireo Malagasy dia mbola miaina amin'ny farim-piainana latsaky ny 2 $/andro, dia maro ireo lohahevitra ilana itadiavana fanafana. Ny sasantsasany taminay dia nihevitra fa afaka hiara-miasa, hanatanteraka ireo hevitra tsara any an-toerana ary hitatitra eto anivon'ny Aterineto izay fivoatr'iany any an-toerana. Ny hevitr'i FOKO dia ny fanapariahana ny fampiasana ny serasera ara-Interneto ho fitaovana hiarovana ny tontolo iainana sy ny fampivoarana ny fiaraha-monina any Madagasikara. Ny niantombohan'ny raharaha dia ny fivoriambe TEDAfrica tany Arusha, any Tanzania, izay natrehin'ny namana maro mpandray anjara amin'ny GVO.
Nahazo fanasana ny hanatrika izany fivoriana izany ny namana mpiblaogy Harinjaka, ary izy no nipoiran'ny hevitry ny FOKO. Angamba mbola aloha loatra izao hijinjana izay mety ho vokatry ny tetikasa FOKO any Madagasikara. Miaraka amin'ny namana mbpiblaogy 2 hafa, dia i Mialy sy i Joan dia in-5 nikarakara fampianarana any amin'ny faritany 2 [Antananarivo sy Toamasina] ary efa misy tetikasa any amin'ny faritany faha-3 hafa aza [Mahajanga], nisy koa fotoana natokana ho fampahalalana ny Aterineto amin'ireo mpianatra amin'ny ambaratonga fototra, nisy fambolen-kazo in-2 miantoana ary nametraka foto-drafitr'asa fiaraha-miasa amin'ny tanàna ambanivohitra vitsivitsy. Azo ambara fa mandroso ny fandraisan'andraikitry ny tsirairay amin'ny fizarana izay vaovao[Citizen media | média citoyen] anefa araky ny efa nambarako tetsy aloha dia angamaba mbola aloha loatra izao hamakafakana izay tena vokatra naterany.
“Ity sary iray ity dia nalaina nandritra ny hetsika Andro Fijoroana ho Fanoherana ny Fahantrana [Stand up Against Poverty day]. Tany Kelilalina [akaikin'ny Ranomafana any amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany, Atsinanan'ny nosy] ny FOKO. Nihaino ireo hetahetan'ireo vehivavy mikasika izay fiainany andavan'andro izahay, sy izay mety atao mba hanatsarana ny fari-piainany ara-toekarena”
Hafiriana izao no nanoratanao hoan'ny GVO ? Ary inona ireo matoan-dohahevitra izay taterinao avy amin'ny blaogasyfera ?
Nanomboka tamin'ny volana Febroary 2007 no nanoratako hoan'ny GVO. Tsy nahalala izay momban'ny GVO akory aho taloha. Fa ny fitadiavan'i Alice Baker, izay mpandrindra ny faritra miteny frantsay [francophone], mpiblaogy izay hamintina ny blaogasyfera. Roa taona lasa izay, ny lohahevitra tena miverimberina matetika teo anivon'ny blaogasyfera dia ny momba ny tontolo iainana, ny toetr'andro sy ny fahantrana. Mbola miverina matetitetika ireo lohahevitra ireo fa taorian'ny fifidianana ho filoham-pirenena sy ho ben'ny tanàna dia nipoitra koa ireo lohahevitra politika sy izay anjara birika entin'ireo “diaspôra” na zanaka am-pielezana mieli-patrana eran'izao tontolo izao.
Inona no fahatsiarovana mahery vaika taminao teo amin'ny sehatry ny blaogy ?
Heveriko fa ny lahatsoratra niarahako nanoratra tamin'i Mialy (mpanoratra GVO mikasika an'i Madagsikara koa) momba ny Valitenin'ny Afrikana an'i Sarkozy taorian'ny nanambarany fa gadran'ny kolotsainy nolovainy ny Afrikana no tonga ato an-tsaiko. Ny hafatra napetrak'ireo mpamaky dia tena lalina tokoa noho izay noheveriko ary ny fomba fanoratana ny famintinana niarahanay nanao dia fianarana lehibe tamiko mihitsy.
Tantarao kely hoe izay nitondra anao hiaina any USA ?
Taorian'ny Sekoly Ambaratonga Faharoa [lycée] izay nataoko tany Parisy, any Frantsa dia nanohy tany amin'ny Anjerimanontolon'i Paul Sabatier tany Toulouse iray taona aho dia nahazo vatsim-pianarana natolotry ny Firenena Mikambana hanohy any amin'ny Anjerimanontolon'i Tulane, any New-Orleans, LA. Tsy mora ny nandray ny fanapahan-kevitra ny handao ny tontolon'ny fianarana amin'ny teny frantsay noho ny hadin'ny fiteny sy nohon'ny fahasarotana ny fanekena ny diplaoma sy ireo taranja efa narahina mipetraka anelanelan'ny tontolom-pianarana Frantsay sy Amerikana. Efa nihamora tokoa izany fifandraisana izany ankehitriny fa taloha dia tena nikorontana mihitsy.
Izaho sy ny fofom-badiko i I-mei, tamin'ny fiandohan'ny fizarana diplaoma. Heveriko fa aorian'ny fanapariahana io sary io dia handinika fatratra ny fanafoanana ny diplaoma izay natolony anay ny Anjerimanontolon'i Purdue [vazivazy]. Fotoam-piravoravoana koa io fotoana io taorian'ny fikarohana izay naharitra 5 taona.
Inona no mahasamihafa ireo Malagasy monina any Amerika Avaratra amin'ireo monina any Eorôpa na any amin'ny faritra hafa ivelan'ny nosy ?
Inoako fa ny ankamaroan'ireo Malagasy monina ivelan'ny nosy dia samy miaky fa samihafa ny fiheverana izay maha-Malagasy hoan'ireo Any Amerika Avaratra, any Eorôpa, na rehefa niverina any an-tanindrazana.
Voalohany aloha, na dia nitombo fatratra aza ny ny isan'ireo Malagasy aty Amerika Avaratra ankehitriny, dia mbola azo heverina ho tena bitika tokoa izany fiaraha-monina izany raha ampitahaina amin'ireo hita any Eorôpa na any an-tanindrazana. Marina fa ny fiteny no tena antony anefa (miteny Frantsay ny ankamaroan'ireo Malagasy) anefa ny antony hafa manaraka koa dia satria mifanila ara-tantara sy ara-kolotsaina amin'i Frantsa i Madagasikara.
Noho izany dia miezaka ny hihaona ireo Malagasy aty Amerika Avaratra satria sarotra kokoa ny mizatra amin'ny kolotsaina vahiny raha tsy misy fanampian'izay mitovy fihevitra efa nisedra izany teo aloha.
Ny fiaraha-monina Malagasy any Frantsa dia isan'ireo izay vaventy indrindra avy any Afrika Atsimon'i Sahara izay monina any Frantsa (70'000 hatramin'ny 80'000 raha isaina ireo mizaka zom-pirenena roa, araky ny fanisan'ny Ministeran'ny fiaraha-miasa [Cooperation] Frantsay tamin'ny taona 2001).
Raha ampitahaintsika amin'ny hoe Malagasy iray ihany no monina aty Lafayette, Indiana (mponina : 184'000), dia mbola ho ela araky ny fihevitro vao hahatratra ny tahan'ny Malagasy mipetraka any Eorôpa ny tahan'ireo aty Amerika Avaratra.
Mazava ho azy fa malaky fitombo kokoa ny isan'ireo Malagasy any amin'ny faritra miteny Frantsay any Kanada. Isan'ny mampiomehy koa fa ny tanànan'i San Francisco sy Antananarivo no tanàn-dehibe mifanalaivtra indrindra eto amin'ny boriborintany, ka heveriko koa fa misy fiantraikany ny halaviran-tany ara-jeografika amin'ny fahasamihafana'ny isan'ireo Malagasy any Amerika Avaratra sy Eorôpa.
Ankoatr'ireo lahatsoratra soratanao hoan'ny GVO ireo, ianao koa dia isan'ireo mpiaro ny fampiasana ny teny Malagasy amin'ny alalan'ny Lingua Project. Azonao amabara aminay ve izay maha-zavadehibe izany tetikasa izany hoan'ny fiteny izay ampiasan'olona latsaky ny 20 tapitrisa ?
Ny fiteny Malagasy dia manana ny toerany manokana anivon'ny tantara sy ny kolotsaina Malagasy anefa koa anivon'ny tantaran'ny fiteny eran'izao tontol izao. io fiteny io no teny ofisialy tsy nentin'ireo mpanjana-tany. Ampisaina manerana ny nosy io fiteny io ary eny Madagasikara ihany no ampiasana azy.
Noh izany dia tena manambara ny firaisam-pirenena sy ny fahaleovantenan'ireo Malagasy mihitsy io fiteny Malagasy io sady fanoharana hoan'ireo fiteny “lahitokana” aman-tany. Nahaliana any ny handinika hoe amin'ny fomba ahoana no andraisan'izay fiaraha-monina mitoka-monina sy tsy mifanerasera firy amin'ny hafa, izay vaovao avy amin'ny lafy valon'izao tontolo izao (GVO in Malagasy). Mandrak'androany dia tena mahaliana amin'ny lafi-tsarany ny fivoatr'izany. Ary antenaina fa mbola hitohy izany fivoatry ny fandehan-javatra izany.
Ankoatry ny fiblaogiana, ianao dia mpikaroka amin'ny sehatry ny HIV/SIDA. Azonay ambara aminay ve izay fototry ny fikarohanao ankehitriny ?
Ny mikasika ny fampidinana ny vidin'ny fitsaboana no karohinay anivon'ny toeram-pikarohanay, ao anatin'izany indrindra ny resaka fitiliana HIV/SIDA any amin'ireo faritra iva fari-piainana.
Efa betsaka tokoa ireo zavatra efa notanterahin'ireo governemanta, ireo tahirim-bola sy ireo mpiasa antsitram-po any an-toerana mikasika fampitandremana sy fiarovantena miatrika ny fipariahan'ny HIV/AIDS. Mandritr'izany fotoana izany dia marobe koa ireo ezaka nataon'ireo governementa sy ireo Fikambanana tsy miankina amin'ny Fanjakana [ONG] amin'ny fanolorana sy fizarana fitsaboana ho hiadiana amin'ny “virus” any amin'ireo faritra fatra-ipariahan'izany aretina izany.
Ny ampahany tsy mbola ampy hatramin'izay dia ny fahafahana manara-maso any an-teorana izay fomba ara-dalàna fanolorana ireo fanafody ireo. Isan'ny lalàna amin'izany ny ny fizahana ny tahan'ny CD4-n'ireo marary, mba hanaraha-maso ny fivoatry ny fiarovan-tenan'ireo marary izarana fanafody. Fikambanana tsy mikatsaka tombony no iasako ka ahafahanay manolotra fitiliana ny tahan'ny CD4 amin'ny vidiny mirary any amin'ireo faritra mahantra ilàna izany indrindra.
Indro sarin'ny fianakavian'ny raiko nalaina tamin'ny taona 1955 tany ho any. 12 mianadahy ry zareo (tsy eo amin'ny sary avokoa). Io zazalahy mahia manao hetina mpangalatr'akoho mijoro aorian'io zaza anaty posiposy io no raiko (8 taona). Matetika izy no hanihanian'ireo rahalahiny izay matanjaka kokoa noho izy.
« Heverinay fa hitarika fahavoazana lehibe hoan’i Madagasikara eo amin’ny lafiny fampandrosoana raha tavela ivelan’ny fifanakalozan-kevitra ifanaovan’izao tontolo izao amin’ny fanatontoloana izy satria tsy nahay nametraka ny tetezana hampitohy ireo izay nosarahin’ny fampiasana na tsia ny serasera ara-solosaina izahay. » Rakotomalala Lova tany amin’ny wemedia : Learning from Global Voices Online | ifocos.org – 22.02.08 >>
05 Marsa 2008, 20:29
> Tomavana: na ilay “ifocos” aza lasa vodika marina: misotra betsaka e !
Manomboka mijery akaiky ny blaogy gasy ny mpanoratra vaovao avy aty. Mieux vaut tard que jamais….
05 Marsa 2008, 22:04
Tsy misy fisaorana fa ianao aza no ankasitrahana maneho ny làlana fa tsy tokony ataontsika “valalan’alika” ny teny Malagasy. Samià isika mazoto amin’ny fampakarana avo ny feon’i Madagasikara
P.S: “ny tompony aza tsy tia azy !”
06 Marsa 2008, 07:29
Izahay dia nanokatra siteweb momban’ny alika eto Madagasikara, fifanakalozan-kevitra sy fifampitaizana ho an’ireo tia alika no ao, satria hitanay fa maro loatra ny loza ateraky ny tsy firarahiana ireny biby ireny aty Madagasikara toy ny haromontana, ny kakitra etsy sy eroa sns tsy ampoizina! Ka mba manasa anao hitsidika ny site-nay sy hampahalala izany amin’ireo havana aman-tsakaiza, indrindra fa ireo eto Madagasikara! Amin’ny teny gasy io site io
09 Marsa 2008, 18:32
Tena nankafizoko ilay siteweb ry Xena ! Tohizo fa ilaina ny mampilaza ny fikarakarana ny alika eto amin’ny internet.
09 Marsa 2008, 22:20
Faly be aho raha nahalala fa eto Indiana ianao. Mipetraka eto indianapolis aho miaraka @ fiakaviako ary somary loa-jafy taty akory aza kanefa dia izao aho vao mahafantatra fa misy malagasy hafa ankoatranay eto Indiana. Nanao fikarohana tany @IUPUI ihany aho kanefa dia ketraka mafy fa tsy nahita malagasy mihintsy. Ambonin’izany mbola nasongadinao tamin’ny fomba tena nety mihintsy ny firenentsika izay tena vitsy mpahafantatra!!!
21 Mey 2008, 09:43
Manao ahoana Lanto,
Faly tokoa aho oe misy malagasy vaovao tsy lafitra eto ( IUPUI de 1 ora monja miala eto).
Mavita be ary mirary soa an’ny fianakavina rehetra e !
21 Mey 2008, 14:33
Niova endrika ny site http://alika.i-love-dogs.com, satria teo izahay vao nahafantatra fa hay tena tia alika tokoa ny malagasy, hitanareo ao avokoa ireo hestika natao sy ho atao miaraka amin’ny ACYM (Association des Cynophiles de Madagascar) izay ny hany institution afaka mi-gere ny livre des origine malgache, jereo ao ny sarin’ny randonée nataonay tamin’ny 03 mai farany teo! Azonao koa atao koa ny mandefa ny sarin’ny alikanao ao mba ho jeren’ny sasany e!
22 Mey 2008, 11:40
Hiresaka koa -> Xena